Shir u dhaxeeyay Hirshabelle iyo DDS Itobiya oo laga soo saaray qodoba muhiim ah | Allbalcad Online
Home WARARKA Shir u dhaxeeyay Hirshabelle iyo DDS Itobiya oo laga soo saaray qodoba...
Shir u dhaxeeyay Hirshabelle iyo DDS Itobiya oo laga soo saaray qodoba muhiim ah
Degmada Feerfeer is maamulka Soomaalida Itoobiya waxa lagu soo gaba gabeeyay shir u dhexeeyay Madaxda Dowlad Goboleedka Hirshabeelle iyo dowlad degaanka Somaalida Itoobiya oo maalmihii ugu danbeyay kaga socday degmadaasi.
Shirkaan oo socday mudo sadex maalmood ah ayaa mas’uuliyiinta labada dhinac waxa ay kaga hadleen sida ay isaga kaashan karaan sugida amaanka degaanada xaduudka iyo arimaha hormarinta labada maamul maadaama ay xaduud wadaagaan.
Madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) iyo Hogaanka nabad galyada dowlad degaanka Somaalida Itoobiya Dr.Xuseen Xaashi Qaasim ayaa shirka hogaaminayay waxana gaba gabadii laga soo saaray sadex qodob oo lagu heshiiyay.
1.in si wada jir ah la isga kaashado sugida amaanka degaanada xaduudka ay wadagaan.
Degaanadii dhawaan shaqaaqada qabiilka ah ka dhacaday in mudo sadex kadib ah loo qabto dib u he shiisiin labada beelood si loo dhameeyo colaada labada qabiil inta laga heshiinayana laga shaqeeyo wada jir amaanka degaanadaasi.
In labada is maamul goboleed ay iska kaashadaan dhanka horumarinta sida ganacsiga iyo wax Barashada.
Madaxa hogaanka Nabad Galayada Dowlad degaanka Soomaalida Dr. Xuseen Qaasim oo madasha shirka ka hadlay ayaa balan qaaday in sodon arday Waxarasho lacag laan ah Dowlad degaanka ugu deeqay Dowlad Goboleedka Hir shabeelle ku waasi oo wax ka baran doono Jaamacada Jig jiga.
Madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) oo intaasi kadib madasha ka hadlay ayaa ka mahad celiyay deeqda Waxbarashada ah ee loo balan qaaday mamaulkiisa, waxa uu sheegay in tani ay qeyb ka tahay horumarinta iyo is kaashiga labada dhinac, isagoo balan qaaday in ka Hirshabeelle ahaan ay diyaar u yihiin xoojinta xariirka labada maamul iyo is kaashiga horumarka iyo amaanka madaama labada maamul ay yihiin daris wadaag.
Previous articleMidowga Yurub oo digniin culus u diray Madaxda Soomaalida
Next articleAxmed Madoobe oo xilkii ka qaaday Wasiirkii Amniga Jubbaland ( Wareegto)